Ọtụtụ iwu a ga-agbaso na imewe nke plastik na-akpụzi - Aojie Mold Co., Ltd.
Ọtụtụ iwu a ga-agbaso na imewe nke plastic akpụ ebu
Na-aga n'ihu mma nke China si n'ichepụta ụlọ ọrụ, mmepe nke ụlọ ọrụ nwere ihe na ndị ọzọ ọrụ na plastic ngwaahịa. Enwere ụkpụrụ siri ike na akụkụ, nkọwa na ịnabata ngwaahịa. Ihe a haziri nke plastik na-akpụzi bụ iji nweta nrụpụta plastik. Dị ka akụkụ dị mkpa nke mma, ndị na-ese ihe kwesịrị iji nlezianya chepụta nha na nkọwapụta nke ebu ahụ, ma tụlee nsogbu ndị nwere ike ịdapụta na nhazi na usoro nrụpụta, ma tụlee nke ọma atụmatụ atụmatụ ahụ, iji meziwanye usoro ihe ịga nke ọma. .
Ya mere, na mma nke ebu imewe larịị bụ nke ukwuu dị mkpa mmepe nke plastic n'ichepụta ụlọ ọrụ. Dị ka onye na-akpụzi plastik plastik, ọ dị mkpa iji nlezianya nyochaa echiche na usoro imepụta ọhụụ, jiri nlezianya nyochaa nsogbu imewe ahụ, chọta ihe ngwọta iji zere nsogbu. Ugboro ugboro, were usoro dị irè iji melite arụmọrụ na sayensị nke ịkpụzi ebu, wee dozie nsogbu ahụ, melite arụmọrụ imewe, melite ntụkwasị obi nke ngwaahịa plastik, melite uru akụ na ụba nke ngwaahịa.
Maka akụkụ ndị nwere oke nkenke na ọdịdị, ndị na-ese ihe kwesịrị iji nlezianya chepụta ma zute nkenke chọrọ. Oge a haziri ahazi na oriri ike na-adịkarịkarịa ala p42.5; n'ozuzu size bụ edo. The nkezi nke ihe kwesịrị ịbụ ihe ezi uche, na nke kacha mma nkezi nwere ike n'ụzọ dị irè melite impermeability nke ihe. Ihe mgbape a na-ahụkarị na ụlọ ndị a na-ahụkarị bụ: mgbawa okpomọkụ, mgbawa mbelata, mgbazinye ndozi, mgbada mgbawa wdg. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu n'oge ọkọchị. Mgbe ị na-eme ka ihe ahụ sie ike, gbasa mmiri oge iji hụ na elu ahụ dị mmiri.
Isi nsogbu okosobode na usoro nke plastic akpụ ebu imewe ezughị iji mee ka ndị na-emepụta wezụga si ọkọlọtọ imewe. N'ime usoro ịkpụzi ebu, ndị na-akpụzi akpụzi enweghị usoro iwu siri ike yana ụkpụrụ doro anya maka ịkpụzi ebu na nrụpụta. Ya mere, ọkwa ọkwa nke ụfọdụ ndị na-ese ihe anaghị atụ ụkpụrụ dị n'otu. N'iji ngwaahịa plastik na-agbasawanye, ihe ndị ziri ezi nke ngwaahịa plastik eji n'oge dị iche iche dịkwa iche.